FileMaker hadda waa Claris | Wararka IPhone
Markaad abuureyso codsiyada aaladaha mobilada ee iOS, Apple waxay na siisaa qalab kala duwan iyadoo kuxiran nooca dalabka aan rabno inaan abuurno. FileMaker waa mid ka mid ah, hase yeeshee looguma talagalin ama loogu talagalin in lagu sameeyo nooc kasta oo codsi ama ciyaaro ah.
FileMaker, waa aalad awood u leh maaraynta xogta, oo ay iska leedahay Apple. Shirkadda ayaa ku dhawaaqday in wixii hadda ka dambeeya aan mar dambe loogu yeeri doonin taas. Magaceeda cusub, oo runtii aysan ahayn, waa Claris, waxa shirkada loogu yeeray markii Apple iibsatay sanadkii 1986 laba sano kadib si magaca loogu badalo FileMaker.
Xilligan FileMaker wuxuu leeyahay wax ka badan 50.000 macmiil iyo in ka badan hal milyan oo isticmaaleyaal ah taas oo u saamaxday inay sii ahaato shirkad faa'iido leh 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Magaca ayaa is badalay waxay ku beegan tahay helitaankii ugu dambeeyay ee ay sameysay shirkadda: Stamplay, adeeg ka caawiya shirkadaha dhammaan noocyadooda inay dhexgalaan xogta laga helo adeegyada daruuriga ah ee dhinac saddexaad, sida Sanduuqa, DocuSign, iwm.
Daahfurka Claris Connect, adeeg u soo bandhigi doona macaamiisha isdhexgal dareen leh si ay u otomaatig u noqdaan qulqulka shaqada ee adeegyada ku saleysan daruuraha, iyaga oo ka badbaadinaya waqtiga hawsha ah soo saarista isdhexgalka dhabarka gaarka ah.
Claris Connect waxaa hogaamin doona agaasimihii hore ee Stamplay, oo yiri:
Claris wuxuu ka yimid asalka Latin "clarus", oo macnaheedu yahay saafi, dhalaal iyo dhalaal. Ma jiraan wax si fiican u soo koobaya hadafka shirkadda: in la siiyo mushkiladaha xalliya xalalka caqliga leh ee ka shaqeeya ganacsigooda. Adoo ballaadhinaya gaadhitaanka barxadeena kana dhigaysa mid casri ah, dhinacyo badan leh oo awood leh oo ah barnaamijyada caadooyinka maxalliga ah iyo adeegyada saddexaad, macaamiisheennu waxay awood u yeelan doonaan inay habeeyaan geeddi-socodkooda ganacsi iyagoo adeegsanaya adeegyada daruuriga ku saleysan ee ay adeegsadaan maalin kasta.
Claris waxaa loo heli karaa barnaamij ahaan leh a bixinta hal mar ama iyada oo loo marayo rukunka sanadlaha ah (qaabka ugu badan ee ay doortaan dadka isticmaala). Waqtigaan la joogo, websaydhka rasmiga ah ee FileMaker ayaa wali lagu magacaabaa taas. Magaca badalkiisu wuxuu u dhici doonaa si tartiib tartiib ah bilaha soo socda halka shirkadu ay sii wadayso inay fuliso howlaha kor u qaadida iyo macluumaadka ee lagama maarmaanka u ah si dadka isticmaala ee raadinaya aysan u aaminin inuu meesha ka baxay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » FileMaker hadda waa Claris
Waxaan xasuustaa anigoo adeegsanaya Claris filemaker 2.0 ama 2.1 Waxaan si fiican u xasuustaa astaanta oo ahayd dhisme u eg qaab-dhismeedka golaha wasiirada, golaha kaydinta faylasha oo mid ka mid ah khaanadaha uu furan yahay.
Tan iyo markaas waxaan isticmaalayay sheygan.
Adeegso Claris Filemaker 3.0, oo markii dambe qeybta 4-aad aan mar dambe loogu yeerin Claris laakiin Faylka-sameeyaha Pro.
Waxaan u isticmaalay badeecadan laga bilaabo 2.1 illaa nooca 18
Ku jawaab duberney sarmiento moreno